‘ऐश्वर्य’की डेब्यू नायिका दीपिका भन्छिन– विनम्र मान्छेबाट छिट्टै इम्प्रेस हुन्छु
नेपाल लाइभ | २०७४ असोज १३ शुक्रबार | Friday, September 29, 2017 ०७:३०:०० मा प्रकाशित
धनगढीकी दीपिका प्रसाई कार्तिक ९ गते ’ऐश्वर्य’बाट नेपाली रजतपटमा डेब्यू गर्दैछिन्। फिल्मको सुटिङ गर्दा कयौंपटक उनलाई बेकार फिल्म खेलेछु भन्ने लागेछ। तर, आफूले दिएको सट दोहोर्याएर हेरेपछि भने उनलाई लागेछ, म योभन्दा पनि राम्रो गर्न सक्छु। फिल्मको पुरै सुटिङ सकिदा उनमा थप उर्जा आएको छ। उनै डेब्यू नायिकासँग नेपाल लाईभले गरेको कुराकानी
अभिनेत्री बन्छु भन्ने लक्ष्य पहिलेदेखि थियो कि पछि फेरियो?
चाहना पहिलेदेखि कै हो। मोडलिङ गरेको केही समयपछि नै मलाई अफर नआएको होइन्। तर ब्याचलरको पढाई सकेपछि मात्र गर्छु भनेर बसे। साथीहरुले पहिले नै भन्थे। शिक्षकहरूले समेत हिरोइन हुने अनुहार छ भन्नु हुन्थ्यो। धेरैले मलाई तिम्रो हाइट छ, रूप छ। पढाइ छ। किन प्रयास गर्देनौ? भन्थे। यसपछि मोडलिङ गर्न थाले। मोडलिङ गर्ने सिलसिलामै अभिनेत्री बन्ने आत्मविश्वास जाग्यो।
राम्री युवतीले हिरोइन नै बन्नुपर्छ र?
राम्री केटी हिरोइन नै बन्नु पर्छ भन्ने केही छैन्। गर्नका लागि थुप्रै पेसाहरू छन्। आफूले जेमा राम्रो गर्न सकिन्छ, त्यही काम गर्ने हो। के काम गर्ने? भन्ने कुरा आफ्नो क्षमता, चाहाना र इच्छामा भरपर्छ।
उसो भए, राम्री केटीलाई हिरोइन हुनुपर्ने किन भनिन्छ?
सोचले गर्दा होला। राम्री केटीले हिरोइन नै बन्नुपर्छ, मोडल हुनुपर्छ भन्ने भनाइ धेरै आउने भएर होला। मलाई त्यही सोचमा सिमित हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन्। राम्री भएर मात्र हुदैन, बौद्धिकता पनि उत्तिकै चाहिन्छ। अनुहारले मात्र केही हुदैन, गर्न पनि सकिन्न। अभिनय क्षमता पनि चाहियो। म हिरोइन बन्ने कुरालाई रूपको दृष्टिकोणले मात्र नहेरियोस भन्ने चाहन्छु।
अभिनेत्री बन्नु कति कठिन काम रहेछ?
धेरै नै कठिन काम रहेछ। मेरो डेब्यू फिल्म भएर होला, सिक्न नै धेरै समय लाग्यो। अझैं पनि सिक्दै छु, धेरै नै बाँकी छ भन्ने मैले बुझिसके। यो डेब्यू मेरा लागि चुनौति बनेको छ। आजको दिनसम्म सबै राम्रो भइरहेको छ। ट्रेलर,गीतबाट राम्रो प्रतिक्रिया बटुलिरहेको छु। यसले मलाई ‘मोटिभेट’ गरेको छ। फिल्म हेरेपछि दर्शकले मलाई कसरी प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, त्यसैको पर्खाइमा छु। मैले अझै धेरै सिक्न बाँकी छ।
के के सिक्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ?
अभिनयका कौशलहरू अझ सिक्न बाँकी छ। त्यस्तै नाच। अनि आफ्नो व्यक्तित्व आदिमा निखारको आवश्यकता छ।
’ऐश्वर्य’को स्क्रिप्टमा के थियो, जसले फिल्म गरूम गरूम लाग्यो?
पहिलो आकर्षण मेरो क्यारेक्टरले गर्दा हो। डेब्यूका लागि यो भूमिका उपयुक्त हुन्छ जस्ता लाग्यो। बाँकी कुरा यसका निर्देशक, अनुभवी कलाकार र राम्रो ब्यानरले गर्दा राजी भए।
फिल्ममा ’ऐश्वर्य’को चरित्र के हो?
फिल्ममा सुपर मोडलको भूमिकामा छु। एउटा सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारकी छोरी, जो आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन चाहन्छे। जसको सपना सुपर मोडल बन्नु हो। आजको दिनमा पनि मोडल भन्ने वित्तिकै सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक सोच पाल्नेहरु धेरै छन्। हामीले यो पनि रोजाइको पेशा हो। यसलाई नराम्रो आँखाले हेर्नु जरूरी छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेका छौं। मुख्य कुरा केटी मान्छे आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने सोचबाट प्रेरित छ।
ट्रेलरमा दुई जना पुरुष ’ऐश्वर्य’ लाई पाउन भिडेको देखिन्छन। व्यक्तिगत जीवनमा यस्तो भएको छ कि छैन?
छ, स्कूल पढ्दा मेरा लागि दुई जना केटा साथीहरूको स्कूलमा कुटाकुट नै भएको थियो। ८ कक्षामा होला सायद, दुई जनाले नै मलाई मनपराउने अनि एउटा साथीले अर्को साथीलाई ’तेरो भाउजु हो’ भन्दा कुटाकुट भयो। यो मैले आफ्नै आँखा अगाडी देखेको घटना हो। तर मलाई यो ‘लभसब’ को चक्कर कहिल्यै मनपरेन।
सायद मनले खाने नभेटिएर होला।
केटाहरू किन केटीका लागि लड्छन जस्तो लाग्छ? ती साथीहरू लड्दा के लाग्यो?
मलाई त त्यसरी लड्नु अनावश्यक जस्तो लागेन। मलाई त्यतिबेला किन हावामा लडिरहेका होलान? न म उनीहरूको ‘गर्लफ्रेण्ड’ हुने न दुईले मलाई पाउने भनेर हाँस उठ्यो। त्यो गरेर केही फाइदा छैन।
केटाहरूप्रतिको नकारात्मक धारणाले त होइन नी?
होइन। माया भनेको मनको सुन्दर अनुभूति हो। त्यो उपयुक्त मान्छेसँग उपयुक्त समयमा हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। मेरो रोजाइको मान्छे र उपयुक्त समय नआएर होला।
’ऐश्वर्य’को चरित्र निर्वाह गर्न तयारी कस्तो थियो?
म आफैं मोडल भएकाले सजिलो भयो। तर र्याम्पमा हिडने मोडल नभएको हुनाले गार्हो पनि उत्तिकै भयो। आफूले सकेको मेहेनत गरेको छु। यसबाहेक फिल्ममा सुपरमोडल भए पनि अरू धेरै चरित्रहरू गर्नुपरेको छ। फिल्मभरि थुप्रै अफ्ठेरो अवस्था आयो। तर मैले गरें।
निर्देशकलाई भने कति गार्हो भयो? दीपिकाबाट काम निकाल्न?
उहाँलाई झन धेरै गाह्रो भयो। यतिको कच्चा मान्छेलाई यो अवस्थामा ल्याउन सजिलो पक्कै थिएन। ट्रेलरमा मोडलका रूपमा प्रोफेसनल देख्या छ भन्नु भएको छ। तर यो अवस्थाको सिर्जना गर्न कति कठिन भयो? मलाई मात्र थाहा छ। निर्देशकज्यूले मलाई यहाँसम्म ल्याउन दिनरात मेहेनत गर्नुभएको छ।
अनि फिल्म गरिरहँदा बेकारमा हिरोइन बन्न ‘ओके’ भनेछु जस्तो लागेन?
धेरैचोटी आयो। तर त्यो आउँदाआउँदै पनि आफूले गरेको काम स्क्रिनमा देख्ने वित्तिकै इनर्जी आउने रहेछ। एक सेकेन्डमै अझ राम्रो गर्न सक्छु भन्ने जोश आउने। जे होस फिल्म गरेर दुःख गर्न सिकेँ।
स्क्रिन बाहिरको दीपिका कस्ती छे?
एउटा सोशल वर्कको स्टुडेन्ट हो। भर्खर त्यसमा मास्टर्स भर्ना भएको छु। सामान्य व्यक्ति हुँ। थोरै तर पोइन्टमा बोल्ने। देखावटी भन्दा सरल मान्छेहरू मनपर्छन। भविष्यप्रति आशावादी मान्छे हो दीपिका।
दीपिकालाई के कुराले छिट्टै इम्प्रेस पार्छ?
मेरो एक्सप्रेसन हेरेर मलाई यस्तो भाछ भन्ने बुझ्दियोस जस्तो लाग्छ। म अनुहार हेरेर प्रभावित हुँदिन। विनम्रताका साथ प्रस्तुत हुने मान्छेबाट छिट्टै प्रभावित हुन्छु।
अन्तमा ’ऐश्वर्य’ हेर्दा आफुले कतिको राम्रो गरेछु जस्तो लाग्छ?
मैले शतप्रतिशत गरे भनेर म मान्दिन। तर यति कुरा हो, मैले क्षमताले भ्याएसम्म उत्कृष्टता दिएको छु। सकेको गरेको छु। मलाई आफ्नो काम राम्रो लागेको छ।
रुपन्देहीमा ३ वटा ट्रक आपसमा ठोक्किँदा ३ को मृत्यु, ९ घाइते